သိုးမွှေးပါသော လွယ်ကူပြီး လှပသောလက်ရာများ | လက်မှုပညာ On
Isabel ကာတာလနျ | 05/11/2021 19:00 | ထည်နှင့်အတူလက်မှုပညာ, လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ
သိုးမွှေးသည် ဦးထုပ်များ၊ ဆွယ်တာများ၊ ပဝါများ သို့မဟုတ် လက်အိတ်များကဲ့သို့သော လှပသောအ၀တ်များကို ချည်ထိုးရန်အတွက်သာမက လက်မှုပညာဖန်တီးရာတွင်လည်း ကစားစရာများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးဖူးပါသလား။ သိုးမွှေးနှင့်လက်မှုပညာ? ၎င်းသည် စျေးသက်သာပြီး ရှာဖွေရလွယ်ကူသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Pompoms၊ လက်သုတ်ပုဝါကွင်းများ၊ အရုပ်များ၊ သော့ကြိုးများ၊ ခေါင်းစည်းများ... ဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိပါသည်။ သိုးမွှေးကဲ့သို့ ပစ္စည်းအသစ်ကို စမ်းသုံးကြည့်ချင်ပါက သိုးမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဤလက်မှုပညာ ၁၅ ခုကို ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အခက်အခဲ အမျိုးအစား နှင့် အဆင့်အားလုံး ရှိပြီး ၎င်းသည် သင့်စိတ်ကြိုက် ဝါသနာ အသစ် ဖြစ်လာမည်မှာ သေချာပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ မည်သည့်အရာကို သင်စတင်မည်နည်း။
1 Pompom လက်သုတ်ပုဝါ ကိုင်ဆောင်သူ
2 သိုးမွှေး pompoms နှင့်အတူယုန်
4 ကလေးများနှင့်အတူလုပ် pompom နားရွက်နှင့်အတူ Headband
5 pompom နှင့်ဘီလူး
8 pompoms ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသော့ချိတ်
9 pompoms ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြက်
11 clothespin နှင့်အတူ Snowman
15 သိုးမွှေး Pom Pom သော့ချိတ်လုပ်နည်း
Pompom လက်သုတ်ပုဝါ ကိုင်ဆောင်သူ
ဤ pompom လက်သုတ်ပဝါကွင်း ၎င်းတို့သည် သင့်အိမ်အတွက်ဖြစ်စေ သင့်ဧည့်သည်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရယူလိုပါက သင့်အိမ်အတွက်ဖြစ်စေ လက်ဆောင်အဖြစ် စားပွဲခင်းအလှဆင်ရန် အလွယ်ကူဆုံးသော သိုးမွှေးလက်မှုပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကို jiffy ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး သင်လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းများ- ရောင်စုံသိုးမွှေး၊ ခက်ရင်း၊ သစ်သား၊ ကြိုး သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ကွင်းများနှင့် ကတ်ကြေး။ ဤ pompom လက်သုတ်ပုဝါကို ပို့စ်တွင် မည်သို့ပြုလုပ်ထားသည်ကို သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ လက်သုတ်ပုဝါ pompom, ကောင်းတဲ့နှင့်လွယ်ကူသော.
သိုးမွှေး pompoms နှင့်အတူယုန်
အိမ်မှာ ဖျော်ဖြေဖို့ အချိန်ခဏလေးပေးရင် ဒီလိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ သိုးမွှေးနှင့် ယုန်. အိုင်ဒီယာကို နှစ်သက်ပါက အခန်းများကို အလှဆင်ရန် အမျိုးမျိုးသောအရောင်များ ပေး၍ သိမ်းထားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အီစတာအားလပ်ရက်အတွင်း ပြုလုပ်ရန် အသင့်တော်ဆုံးသော သိုးမွှေးလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းများအဖြစ် သိုးမွှေးအရောင်နှစ်မျိုး (ကိုယ်ထည်၊ အမြီးနှင့် muzzle)၊ လက်မှုပညာ သို့မဟုတ် ဘောလုံးများ၊ ကတ်ထူပြား သို့မဟုတ် ရောင်စုံခံစားခြင်း၊ ကတ်ကြေးနှင့် ကော်ပူသေနတ်တစ်လက်တို့ကို ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ဆောင်းပါးကိုကြည့်ရှုပါ။ သိုးမွှေး pompoms နှင့်အတူယုန်.
စင်များ၊ ခြင်းတောင်းများ သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အိမ်တွင်ရှိသောအရာအချို့ကို ကွဲပြားစွာထိတွေ့လိုပါက ဤလှပစေရန် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ pompom ပန်းကုံး. သင့်တွင် အားလပ်ချိန်အနည်းငယ်ရှိပါက၊ သိုလှောင်ထားသည့် ချည်မျှင်၊ ခက်ရင်းခွ၊ ကတ်ကြေးအချို့နှင့် LED ကြိုးမီးအချို့ကို ထုတ်ယူပါ။
ဤအရာသည် အရိုးရှင်းဆုံး သိုးမွှေးလက်မှုပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အပြီးသတ်ရန် အချိန်အတော်ကြာမည်မဟုတ်ပါ။ ပို့စ်တွင် အဆင့်အားလုံး သင့်တွင်ရှိသည်။ Pompom ပန်းကုံး.
ကလေးများနှင့်အတူလုပ် pompom နားရွက်နှင့်အတူ Headband
သိုးမွှေးလက်မှုပညာကိုလည်း ဆံပင်အသုံးအဆောင်များပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုက ဒီလိုပါ။ pompom နားခေါင်းစည်း. ချစ်စရာကောင်းပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုပါ။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် သိုးမွှေးအရောင်နှစ်ရောင်၊ ကတ်ကြေး၊ ကတ်ထူ သို့မဟုတ် အီဗာရာဘာ၊ ချောမွေ့သော ခေါင်းပတ်နှင့် ခေါင်းဖြီးတို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုထုတ်လုပ်လဲဆိုတာ ဆောင်းပါးမှာ အဆင့်ဆင့် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သိုးမွှေးနှင့် pompom နားရွက်ပါသော ခေါင်းစွပ်.
ဟယ်လိုဝင်းဆိုတာ လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်သိုးမွှေးနှင့်လက်မှုပညာ နဂါး. ကလေးတွေက ဖျော်ဖြေပေးမှာဖြစ်ပြီး ခဏတာ ပျော်ရွှင်မှုရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို စင်ပေါ်တွင် ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ကျောပိုးအိတ် သို့မဟုတ် ကားတစ်စီး၏ နောက်ကြည့်မှန်တွင် ချိတ်ဆွဲထားရန် စွန့်ပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်အသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်။
ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေ လိုအပ်မလဲ။ ရောင်စုံသိုးမွှေး။ နဂါး၏ပါးစပ်၊ လက်ရာမျက်လုံး၊ ခက်ရင်းခွ၊ ကတ်ကြေးနှင့် ကော်အတွက် အမြှုပ်ထွက်ရာဘာ၊ ပန်းရောင် သို့မဟုတ် နက်မှောင်သော ခံစားမှုကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Pompom Monster.
အောက်ဖော်ပြပါ လက်ရာများကို သင် အသုံးချနိုင်သည် ဖန်ပုလင်း အိမ်မှာ အမှိုက်စွန့်ပစ်ဖို့ သိုးမွှေးကြိုးတွေနဲ့ အလှဆင်ပြီး ပန်းအိုး ဒါမှမဟုတ် ပန်းအိုးတွေဖြစ်အောင် အလှဆင်ပြီး ဒုတိယအသက်ကို ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ သိုးမွှေးလက်မှုပညာဖြင့် သင့်အိမ်တွင် ထူးခြားသောထိတွေ့မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းများမှာ ဖန်ပုလင်းများ၊ ကြိုးများ၊ ရောင်စုံသိုးမွှေးများ၊ ကတ်ကြေးများနှင့် ပူသောဆီလီကွန်များ။ ၎င်းတို့ကို သင်ရရှိပြီးသည်နှင့် သင်လိုအပ်မည့် တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ ထုတ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းကို သိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ပို့စ်တွင်ရှာဖွေပါ။ ပုလင်းကြိုးနှင့်သိုးမွှေးနှင့်အတူအလှဆင်!
အိမ်အလှဆင်ရာမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ အထိအတွေ့ကို ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သိုးမွှေးကြိုးနဲ့ ကြိုးလေးတွေနဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဘောင် ငြီးငွေ့နေပြီဖြစ်သော အချို့သော အဟောင်းများကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မူရင်းအတိုင်း အသုံးချပါ။ ၎င်းသည် သိုးမွှေးပြုလုပ်ရန် အလွယ်ကူဆုံး လက်မှုပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရလဒ်မှာ အလွန်မိုက်သည်။
ဘောင်တစ်ခု၊ ကြိုးတစ်ချောင်း၊ ရောင်စုံသိုးမွှေး၊ ပူပြင်းသော ဆီလီကွန်နှင့် ကတ်ကြေးတစ်စုံကို ရယူပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း သင်အနှစ်သက်ဆုံး ဓာတ်ပုံများကို တင်နိုင်သည့် လှပသောဘောင်တစ်ခုကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်နည်းလေးသိချင်ရင် ပို့စ်ကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။ ကြိုးနှင့်သိုးမွှေးနှင့်အတူအလှဆင်ဘောင်.
သင့်သော့များ အလွယ်တကူ ပျောက်ဆုံးသွားသလား သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကို သိပါသလား။ ဤအတူ pom pom သော့ချိတ် နောက်တဖန်မဖြစ်ရ။ သိုးမွှေးလက်မှုပညာ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဆိုရင် သယ်ရတာ အရမ်းလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ pompoms ၊ သော့ကွင်း၊ ခက်ရင်းနဲ့ ကတ်ကြေးတစ်ရံတို့လို ရောင်စုံချည်မျှင်တွေတောင် ပစ္စည်းတွေ အများကြီး မလိုအပ်ပါဘူး။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် အလွန်လွယ်ကူပြီး လှပသောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ဆောင်ပေးချင်ရင် အရမ်းကြည့်ကောင်းမယ့် အသေးစိတ်အချက်လေးတွေပါ။ ၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကြည့်ရန် ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ မိခင်များနေ့အတွက် Pompom သော့ချက်.
သော့ချိတ်အဖြစ်၊ ကျောပိုးအိတ်အတွက် အဆင်တန်ဆာအဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကားရဲ့နောက်ကြည့်မှန်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ pompoms ပါတဲ့ ဒီကြက်က တစ်မျိုးပါပဲ။ သိုးမွှေးနှင့်လက်မှုပညာ ကလေးတွေနဲ့ လုပ်ရတာ ပိုပျော်တယ်။ ဤချစ်စရာကောင်းသော ကြက်ကလေးလုပ်နည်းကို အံသြစွာ သင်ယူကြလိမ့်မည်။
သင်လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းများမှာ ရောင်စုံသိုးမွှေး၊ ကတ်ကြေး၊ အမြှုပ်များ၊ လက်ကွက်မျက်လုံးများ၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော ပုတီးစေ့များနှင့် ပူပြင်းသော ဆီလီကွန်များကဲ့သို့သော အခြားလက်မှုပညာများတွင် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ရှာဖွေပါ။ သိုးမွှေး pompom နှင့်အတူကြက်.
အောက်ပါတို့သည် ကလေးများအတွက် သိုးမွှေးလက်မှုပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အတွက် အရုပ်ဖန်တီးခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များကို နှစ်သက်ကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကလေးများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော သိုးမွေးလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် ဝိုင်ပုလင်းများ၊ ရောင်စုံသိုးမွှေးများ၊ ကျောက်ကပ်ကြိုးများ၊ မြင်းကုန်းနှီးအတွက် ကတ္တီပါအထည်၊ ကတ်ကြေးနှင့် ကော်သေနတ်။
အဆင့်အားလုံးကို လိုက်နာရင် ပို့စ်မှာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဖော့ဆို့နှင့်သိုးမွှေးနှင့်အတူလွယ်ကူသောမြင်း သင်ချက်ချင်းအံ့သြစရာကောင်းပြီး ပျော်စရာအရုပ်တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။
clothespin နှင့်အတူ Snowman
အခြားလက်မှုပညာများ သိုးမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းမှ သင်ကျန်ရှိခဲ့သော အကြွင်းအကျန်များဖြင့် ဤအရာကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Snowman သင့်ရဲ့အဝတ်တွေကိုအလှဆင်ဖို့။ မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကြာပါမည်။ ထို့အပြင်, theme သည်ဆောင်းရာသီအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
ပစ္စည်းများအနေဖြင့် သစ်သားအဝတ်ညှပ်များ၊ အဖြူရောင်ဆေးအနည်းငယ်၊ အနက်ရောင်အမှတ်အသား၊ ကတ်ကြေး၊ ကော်နှင့် ရောင်စုံသိုးမွှေးများကို စုဆောင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ရှာဖွေပါ။ clothespin နှင့်အတူ Snowman!
အောက်ပါလက်ရာများဖြင့် သစ်သီးများကို သိုးမွှေးဖြင့်ပြုလုပ်သောအခါတွင် သင်၏တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုအားလုံးကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ကီဝီ ဒါပေမယ့် သင်စိတ်ကူးနိုင်တဲ့ အသီးတိုင်းနီးပါးကို စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီး၊ ဖရဲသီး...
ရှင်းလင်းချက်ဗီဒီယိုတွင် သိုးမွှေးကီဝီ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြီးသွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လက်ထဲတွင် အညိုရောင်၊ အစိမ်း၊ အဖြူနှင့် အနက်ရောင် သိုးမွှေး၊ ကတ်ကြေး၊
သိုးမွှေးနဲ့ လက်မှုပညာကို ဝါသနာပါရင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေးဆောင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ရဲ့ ဧရိယာတချို့ကို အလှဆင်ဖို့ အရမ်းကောင်းမယ့် အိုင်ဒီယာကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ သိုးမွှေး cupcakes. ဒါ့အပြင် ပိုပျော်စရာကောင်းတဲ့လေကို ပေးစွမ်းနိုင်စေဖို့အတွက် သူတို့ကို လက်ရာမျက်လုံးတွေ ကပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
သင်လိုအပ်မည့် အဓိကဒြပ်စင်မှာ သိုးမွှေးဖြစ်သော်လည်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ကိတ်မုန့်၊ ခက်ရင်းခွ၊ ကတ်ကြေး၊ ကော်နှင့် လက်မှုမျက်လုံးများ (ရွေးချယ်နိုင်သည်)။ အဆင့်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သော အလွန်ရိုးရှင်းသော လက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သိုးမွှေးမယားစကား.
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အချို့သော သိုးမွှေးလက်မှုပညာသည် ၎င်းတို့ထင်သည်ထက် လုပ်အားပိုနည်းသောကြောင့် အသစ်သောအရာများကို အမြဲကြိုးစားရကျိုးနပ်သည်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးပေါ့။ သိုးမွှေးနှင့် ရေဘဝဲ. ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးသော လက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်စေသော်လည်း ၎င်းသည် မဟုတ်ပါ။
ပစ္စည်းများအနေဖြင့် သိုးမွှေး၊ အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား၊ ကတ်ကြေး၊ ခလုတ်များ၊ အပ်များနှင့် အခြားအရာများ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျန်ကိရိယာများနှင့် ၎င်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ပို့စ်တွင် သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ရေဘဝဲအရုပ်ကိုသိုးမွှေးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.
သိုးမွှေး Pom Pom သော့ချိတ်လုပ်နည်း
သော့ချိတ်များသည် ဖျော်ဖြေရေးအချိန်များကို ခံစားရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် သိုးမွှေးလက်မှုပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ pompom မော်ဒယ်သည် အလွန်လှပပြီး flash ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင် အိတ်နဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေကို အလှဆင်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ဖို့ သိုးမွှေး pom pom သော့ချိတ် ဤပစ္စည်းများကို သင်စုဆောင်းရပါမည်- လိုက်ဖက်သောအရောင်ရှိသောသိုးမွှေး၊ ခက်ရင်းခွ၊ ကတ်ကြေး၊ အချို့ကတ်ထူပြားနှင့် သော့ကွင်းများ။
ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းသော်လည်း သော့ချိတ်တစ်ခု မပြုလုပ်ဖူးပါက မည်ကဲ့သို့ ဖတ်ရှုနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။ သိုးမွှေး Pom Pom သော့ချိတ်လုပ်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ » ထည်နှင့်အတူလက်မှုပညာ » သိုးမွှေးဖြင့် လွယ်ကူပြီး လှပသော လက်မှုပညာ ၁၅
Venetian blinds အမျိုးအစားနှင့် အားသာချက်အားလုံးကို သင်သိပါသလား။